Ngesinye isikhathi ngo-Russian inganekwane, umqondo "ufile" nelithi "abaphilayo" amanzi. bogatyrs Okokuqala wageza isilonda isuselwe, kanye sips ambalwa umuntu wesibili wavuseleleka. Ungakwazi ukholelwa ukuthi legend noma cha sibethembe, kodwa ososayensi baye bathola ukuthi ukuthola kanjani labo ketshezi magic. A inqubo ebizwa nge-electrolysis. Ngenxa kagesi ukuze amanzi ezejwayelekile is etholwe "bukhoma" futhi "amanzi efile". ngezandla zakhe apharathasi yenziwa kalula ngezinto lutholakale kalula.
Ingqikithi yalo magciwane eyingqayizivele, noma yokuthakwa kwamakhemikhali kancane
Ukuze uqale isitsha amanzi lehliselwa amapuleti amabili metal, ngamunye okuyinto ixhunywe omunye oxhumana ibhethri. Nge kuvalwe lesi sifunda kwenzeka ugesi, futhi inqubo iqala ukunyakaza electron in the ketshezi. Eduze ipuleti anode Kumiswa imvelo esidi emhlabeni cathode - ane-alikhali. Ngemva Ukukhipha lwamanje, konke ixubene, ukubuyela esimweni salo esivamile, amanzi futhi i ketshezi abavamile.
Phakathi ukuphendula electrolytic kwenzeka kumiswa izinto eziningana, kuhlanganise:
umoya-mpilo, i-ozone futhi acid;
chlorine ne-hydrogen peroxide,
ingabe bonke kule ndaba Nivelaphi? Kuyaziwa ukuthi amanzi kuphela zemvelo jikelele, ngaphambi ukuchayeka okungakwazi ukumelana noma yiluphi uketshezi noma Gasses noma amaminerali ezaziwayo. Ngenxa yalokho we-electrolysis yokushintsha izibopho yamangqamuzana ezinto eziphilayo. isixazululo Kuvulwa iba ethambile futhi esobala ngaphezulu yasekuqaleni. Oxidants ikhiqizwa amanzi uqobo, disinfected ketshezi bese ubuyela esimweni saso sangaphambilini ngokwenza umsebenzi wayo.
Lokho okubizwa ngokuthi elithi "bukhoma" futhi "amanzi abafileyo"? Idivayisi, enziwe ngezandla zakhe, ngeke nje ukukhombisa izingane nakho fun. Isayensi efakazelwe ephulukisa izakhiwo kanye magciwane idatha uketshezi.
Ukwakheka kanye izici "inganekwane" uketshezi
Umshini wokuqala ngokwenza amanzi "bukhoma" futhi "ufile" ngezandla zabo izicelo ezimbonini yakhelwe udondolo eyodwa emithonjeni e-USSR. Bona ngephutha wathola izimfanelo okuphulukisa ketshezi. Ngemva ukugeza kuyo abasebenzi ukuphulukisa ukusha kanye nezimboni esikhumbeni, ukusetshenziswa kwamanzi ngaphakathi kwandisa ithoni jikelele nokusebenza nabantu. Phenomenon balithanda imithi, kodwa ikakhulukazi ukusetshenziswa owawuvamile activators ayitholakalanga.
Kwatholakala ukuthi iqembu "bukhoma" has a imvelo kancane ane-alikhali futhi kuyinto biostimulant eqinile. Imbewu iphathwa uyinike amahlumela namandla nokuvuna ocebile. Zokungenisa kuqinisa omzimba omuntu, ngcono ukugaya. Abone umphumela wokusebenza amanzi ezifana ku inqubo yokuguga ukukhula zomdlavuza.
"Dead" amanzi ene-asidi kancane has a ukwakheka, kuyinto magciwane eqinile futhi lokuhlanzisisa ejenti. Lokhu ingxenyenamba cishe inuka acid futhi astringency okuncane. Lo luketshezi imikhuhlane belashwa kahle by uhlambulule. It kwehlisa blood pressure, upholisa ubuhlungu bamalunga, aqede ukuqwasha.
Indlela yokwenza idivayisi amanzi "bukhoma" futhi "ufile" ngezandla zakhe
Idivayisi ezilula for electrolysis oqondile libuthene kusukela izingxenye ezilandelayo:
litre ingilazi esitsheni;
isiqeshana ezimbili wamaqhuqhuva insimbi engagqwali (145 mm 40 mm);
diode ibhuloho ;
ezimbili izingxenye ikhebula amandla;
denim Isikhwama noma ngoseyili lendwangu ;
umbuthano plastic ne imigodi.
Ngamunye strip onqenqemeni is eligoqiwe i-engela 90 degrees (10 mm). On izingxenye izimisele we yamba 2 imigodi imishudo. Ngolunye lwalezo electrode phakathi izimbobo obandayo wenze enye (ngaphezulu) ukuze ukufakwa kwe-diode.
I-oda inhlangano yabantwana bakwa-kudivayisi
Idivayisi ayixhunyiwe "bukhoma" futhi "ufile" amanzi ngezandla babuthana ukulandelana elandelayo. Electrode ezibekwe phezu lid ukubophela nge ngezikulufo. Yensimbi kumele kube parallel nomunye. Diode screwed emgodini okuhambisanayo futhi ixhunywe ku-ukuphela ithiphu zokuthunyelwa. Ukuze electrode yesibili kubuye wire soldered. Bobabili okukhipha okufutshane inkinobho.
Ukuze diode anode-ipuleti bakhathale crosslinked ngendwangu isikhwama lokuqoqa amanzi "ufile". Ngokushesha ngemuva kokucima amandla le khava kudingeka ngokushesha uthele uketshezi ngesitsha ehlukile. Duzane kwakheka electrode omubi ubizwa CONCENTRATE "Abaphilayo" amanzi.
Indwangu isaka isetshenziswa njengoba ulwelwesi ngokuhlukana. It kuvimbela kuhlangana yesixazululo ngemva ugesi. I diode ukhonza njengelungu "rectifier" uhlelo lokwabelana ngamafayela kunethiwekhi.
Iinsetjenziswa zokukhwela okwenza amanzi "bukhoma" futhi "ufile" ngezandla zakho ngomumo. It uhlala ukugcwalisa imbiza kanye isikhwama ketshezi abavamile kusukela empompini bese uvula i-plug ku inethiwekhi.
Koze kube nini singalondoloza izinga yayo "bukhoma" namanzi "ufile"
Idivayisi ngezandla zakho (lesi sithombe sikhombisa) zesikole powered up. Ukusabela kufanele yaqhubeka imizuzu engu-5 ngaphambi Ukushisa lamabhange ababuthakathaka. Phakathi nalesi sikhathi, kudingeka alungiselele ezimbili izitsha ngoba ukumpontshelwa etholwe izingxenyana zaso. Ngokushesha ngemva AC electrode isuswe ngokucophelela kusukela isitsha kanye ikhava ngendwangu. amanzi "Dead" kuthululwe kusukela sikhwama kwelinye isitsha, kanye "Abaphilayo" (ezisele ebhange main) - kwenye.
Uma ukulibala kanti ushiye uketshezi ezimbili kule esitsheni yokuqala, ukusabela kwenzeka ngokushesha kakhulu oda reverse, futhi zonke izingxenye ehlukaniswe ingxube. Amanzi izolokhu icuphekile, disinfected futhi ewusizo, kodwa uzolahlekelwa izakhiwo elikhethekile wanika umshini "bukhoma" futhi "ufile" amanzi. izandla zami siqu njengoba ungakwazi konakalisa konke futhi kufanele uqale inqubo ngokuphindaphindiwe.
nokugcinwa nezikhathi zimi kanje:
liquid esidi ( "ufile") egcinwe amasonto amabili;
ane-alikhali ( "bukhoma") Kufanele udliwe kungakapheli amahora ambalwa, njengoba ngokushesha ilahlekelwa izimfanelo zalo zokwelapha.
Okungenzeka ukufaka esiku engagqwali anode futhi cathode
Ngokwenza idivayisi amanzi "bukhoma" futhi "ufile" ngezandla zakhe, kubalulekile ukusebenzisa steel ukudla, wahlanza kuzo zonke izinhlobo amanyela. It is wafakazela ukuthi ngaphansi kwethonya ugesi ngesikhathi ukusabela molecule izinsimbi ezisindayo zikhishwa. Amanzi ayegcwele nickel ion futhi chromium, molybdenum nensimbi, vanadium nabanye, iba hhayi kuphela eziyingozi futhi enobuthi. Ngeke ukuba angasetshenziselwa ukuphuza.
Yingakho i- le cathode futhi anode e thuluzi kuthathwe engagqwali steel.
Indlela thunga izilenge ngezandla zakhe: ukulungiselela lokuthunga
Ifomu womshini izindlela engadini: amathiphu okuhambisa
Indlela ukupheka imana microwave
White House (eMoscow). Sturm futhi amabhomu ka White House e Moscow
Izidakamizwa lipid-ukwehlisa "Liptonorm": yokusetshenziswa